ओली: २४ लाखभन्दा बढी खोप कसले लुकायो वा बेच्यो ?
काठमाडौं – प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले कोरोना महामारीको तेस्रो लहरमा सरकार गैरजिम्मेवार र निष्प्रभावी देखिएको बताएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ लहरले जनजीवन आक्रान्त बन्दा पनि सरकार गैरजिम्मेवार बनेको बताएका हुन् ।
२४ लाखभन्दा बढी खोप हराएको सरकारी अधिकारीहरुले नै स्वीकार गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले भनेका छन्, ‘कहाँ गयो त्यति धेरै मात्राको खोप ? कसले लुकायो वा बेच्यो ? यसका लागि को जिम्मेवार छ ? ‘
खोडकार्ड अनिवार्य हास्यास्पद: एमालेले सार्वजनिक सेवा उपयोगका लागि खोपकार्ड अनिवार्य गर्नु हास्यास्पद र विदेभकारी कदम भएको बताएको छ ।
सरकारले पुस मसान्तभित्र दुई तिहाई र चैतभित्र सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने घोषणा गरेपछि हालसम्म ४० प्रतिशतले मात्र लगाएको एमालेको दाबी छ ।
बजेट कटौती गरेकोमा विरोध : सरकारले अकारण स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर जनस्वास्थ्य माथि खेलबाड गरेको एमालेको आरोप छ ।
आफ्नो नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ३९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण अघि बढाएको र, त्यसका लागि ६ अर्ब १५ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा अहिलेको सरकारले १ अर्ब ५० करोड कटौती गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।